PVC Camera gabion Mesh - China Hebei Samsung Metal Wire Mesh
PVC Camera gabion Mesh
Material PVC camera gabion PVC gabions camera, uhlobo Wire Mesh ibhokisi ungumphumela, wenziwe ngamangqamuzana esindayo olunezinhlangothi wire inetha ukuthi nokwelukiweyo ngocingo metal. PVC gabions camera ububanzi ngaphandle kusuka 3.0mm ukuba 4.5mm, futhi ububanzi usebe wire noma onqenqemeni wire ingenye wire gauge mkhulu kunokhalo okuvame anezikhala ucingo. PVC gabions camera zenziwa plastic camera lashukumisa steel wire: izinga okusezingeni carbon ongaphakeme steel wire, thina ukugoqa PVC Ukuvikelwa ungqimba phezu lashukumisa steel wire, bese sifake ke ...
Fob Inani: US $ 5 - 33 / Setha
Min.Order Ubuningi: 10 Setha / Imisa
Supply Ikhono: 500 Setha / Imisa Day ngayinye
Material PVC camera gabion
PVC gabions camera , uhlobo Wire Mesh ibhokisi ungumphumela, wenziwe ngamangqamuzana esindayo olunezinhlangothi wire inetha ukuthi nokwelukiweyo ngocingo metal. PVC gabions camera ububanzi ngaphandle kusuka 3.0mm ukuba 4.5mm, futhi ububanzi usebe wire noma onqenqemeni wire ingenye wire gauge mkhulu kunokhalo okuvame anezikhala ucingo.
PVC gabions camera zenziwa plastic camera lashukumisa steel wire: izinga okusezingeni carbon ongaphakeme steel wire, thina ukugoqa PVC Ukuvikelwa ungqimba phezu lashukumisa steel wire, bese sifake kube olunezinhlangothi wire inetha kuhlanganise yonke imininingwane. Lokhu PVC Ukuvikelwa ungqimba singaqinisa isivikelo okusezingeni eliphezulu ukungcoliswa kwemvelo. Khonamanjalo singakhetha imibala ehlukene ukuze sisikhuthazelele ne ezungezile.
Ezibekiweko evamile gabion PVC camera
Ngokuvamile ubukhulu ivela 2.5mm ukuba 3.4mm
Okunye Ukucaciswa evela kumakhasimende ayatholakala.
Isicelo PVC camera gabions
Gabions asetshenziswa ezimweni eziningi kuhlanganise kuqiniswa zomhlaba ukunyakaza nokuguguleka kwenhlabathi, ukulawula emfuleni, amadamu, umsele ukulungiswa, ukudweba kanye izindonga esaziwa, njll
Izici kanye nezinzuzo PVC gabions camera
PVC gabions camera eningakuthwala le ayimigodi eqinile futhi extruding amandla bese ugcine ezakheke ngayo. Gabions kulula esanele sokufaka ukuthi akukho isipiliyoni kuyadingeka ukuze uthole umphumela omuhle. PVC camera ngaphandle lashukumisa steel wire, PVC camera gaions kungcono e ukugqwala resistence, antioxidation, ukuqina, ngesikhathi esifanayo PVC camera gabion sihle nakakhulu kuka non-PVC camera. Asikwazi ukufanisa ngayo imvelo ezungeze futhi wenze abantu bekhululeke kakhudlwana.
Previous: Lashukumisa gabion Mesh
Olandelayo: U Uhlobo Wire